စစ်တွေမြို့က လ ၀ ကရုံး နှစ် ရုံး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Complaint / Claim » စစ်တွေမြို့က လ ၀ ကရုံး နှစ် ရုံး
စစ်တွေမြို့က လ ၀ ကရုံး နှစ် ရုံး
Posted by kyawkyaw11 on Sep 20, 2011 in Complaint / Claim | 15 comments
ပါတယ် ဒါနဲ့ ပြန်တော့သူငယ်ချင်းကိုကျွန်တော်အလည်အတင်းခေါ်ပါတယ် ဒါနဲ့ဘဲ သူလိုက်ဘို့ဖြစ်
လာတော့ လေယာဉ်လက်မှတ်သွားဝယ်တော့ (2)ယောက်စာ ဒီမှာတင်ကျွန်တော့ကိုတော့ရောင်းပြီး
ကျွန်တော့သူငယ်ချင်းကိုမရောင်းပါဘူး ဒါနဲ့မေးကြည့်တော့ သူ့မှတ်ပုံတင်မှာ ကမန်အစလာမ်
ဖြစ်နေပါတယ် ဒါနဲ့သူငယ်ချင်းကိုမေးကြည့်တော့ ကမန်ကရခိုင်တိုင်းရင်းသားပါလို့ပြောပါတယ်
ဒါနဲ့လေယာဉ်ရုံးကိုမေးကြည့်တော့ စစ်တွေမြို့က ဦးအောင်လှထွန်း ၏ထောက်ခံချက်ပါမှရောင်းရမယ်
ဒီဟာနဲ့မလုံလောက်ပဲ ဦးအောင်လှထွန်းလက်မှတ်ပါရင်ရပြီ ဖြစ်နေပါတယ်
ရင်လေးမိတယ်ဝန်ကြီးရေ တစ်ဘက်ကကူးလာသူတွကို ဦးအောင်လှထွန်းလက်မှတ်နဲ့
မှတ်ပုံတင်တွေ ထုပ်ပေးမိနေရင်တော့—— ငွေဆိုတာကလည်း လူတိုင်းကြိုက်တဲ့နှင်းဆီ
ခိုင်မဟုတ်လား —–ကြည့်လုပ်ကြပါအုံး ၀န်ကြီးများတို့ရေ————
လှပ သန့်ရှင်းတဲ့နိုင်ငံလေးဖြစ်လာဖို့ ၀ိုင်းဝန်းကြိုးစားကြပါစို့–
View all posts by kyawkyaw11 →
ဒါနဲ့လေယာဉ်ရုံးကိုမေးကြည့်တော့ လေယာဉ်၊ ရေယာဉ်၊ မော်တော်ယာဉ်၊ လက်မှတ်တွေကို
စစ်တွေမြို့က ဦးအောင်လှထွန်း ၏ထောက်ခံချက်ပါမှရောင်းရမယ်
လို့လ၀က ခရိုင်မှူးက နှုပ်ဖြင့်ညွန်ကြားထားဆိုဘဲ
ဦးအောင်လှထွန်းက ဘာလဲတော့မသိဘူး ထောက်ခံချက်တွေထုပ်ပေးနေဆိုပဲ တံဆိတ်တုံးနဲ့လက်မှတ်နဲ့
ခရီးသွားထောက်ခံချက်ဆိုရင် လ၀က ရုံးအိမ်သာ/လမ်း ပြုပြင်ရန် 20000 မှနေ 60000 ထိပေးရဆိုဘဲ
မှတ်ပုံတင်ထောက်ခံချက်ဆို 50000 မှ 100000 ကျော်ထိပေးရတယ်လို့ပြောပါတယ်
လူတစ်ယောက်မျိုးရိုးစဉ်ဆက်ဇယားဟာ လ၀က ရုံးမှာအပြည့်အစုံရှိပါတယ်ဘာလူမျိုးဖြစ်တယ် ဘယ်မှာ
မွေးတယ် ဘယ်မှာနေတယ် ဘာလုပ်တယ် ဘယ်နေ့မွေးတယ် ၊
ဘာထောက်ခံချက်ပေးမှန်းမသိ စစ်တွေမှာတော့ ၀န်ကြီးချုပ်ထက်မြင့်တယ်ထင်တယ်
မှတ်ပုံတင်တွေ ထုပ်ပေးမိနေရင်တော့—— ငွေဆိုတာကလည်း ပျိုတိုင်းကြိုက်တဲ့နှင်းဆီ
ကြားနေရတာ ရင်လေးတယ် စိတ်တွေလဲ မောတယ် တစ်ကယ်မှ ဟုတ်ရဲ့လား ၊
လွတ်လပ်စွာသွားလာခွင့်ပေးထားပီလေ (နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင် ပန်းရောင်ကဒ်) ရှိရင်လေ။
လူကြီးမင်းများနှင့်ဆန့် ကျင်ဖက်ထပ်ရေးရပါအုံးမယ်။အရင့်အရင်ပို့ စ်တွေမှာ နာမည်တပ်ပြီးဇွတ်ဝင်ပြောခဲ့သူမှာမည်သူနည်း။
အားလုံးမည်သူ့ ကိုထင်ပါသလဲ။ဘယ်သူမှ ဘုရားမဟုတ်။တိကျအောင်ပြောဖို့ ရာ လူကြီးမင်းများတောင် တတ်နိုင်မည်မထင်ပါ။
ကျွန်တော်သိရသလောက် သူတို့ အစဉ်တစိုက်စွပ်စွဲခဲ့တဲ့ ရဲအောင်လံကားဂိတ်မှဦးကျော်ကျော်မည်သို့ မျှမဖြစ်နိုင်။Thantwetharနဲ့ maythakhin
အကောင့်တွေဟာ ရဲအောင်လံ ဂိတ်ပိုင်ရှင် ဦးကျော်ကျော်ပါဆိုပြီး အစဉ်တစိုက် ချောက်ချခဲ့တာ အားလုံးအသိမို့ ပြောစရာထပ်မလိုအပ်ဘူးထင်ရဲ့။
မည်သို့ သော ပို့ စ်မျိုးတင်ခဲ့ပါစေ. ဒါဟာရဲအောင်လံ ပိုင်ရှင်ဖက်လှည့်ပြီးအဆုံးသတ်အပိတ်ခံခဲ့ရတာချည်းပါ။အုပ်စုလိုက်ဝင်၊အင်အားသုံးပြီး အဓ္ဓမ၊
ဒုက္ခကျအောင် လုပ်ကြံရေးသားချက်မျိုးသားဖြစ်ပါတယ်။တစ်ချိန်ကတင်ခဲ့သော ပို့ စ်တိုင်းမှာ လူကြီးမင်းများတွေ့ ခဲ့မယ်လို့ ယူဆပါတယ်။
ပထမအကြိမ် Thantwethar ဝင်လာတော့ ice cube,pyinlepyaw,တို့ ဟာ ဦးခင်မောင်မြင့်ပါ ဆိုပြီးစွပ်စွဲပြီး မိတ်ဆက်လာတာပါ။ဟုတ်ရဲ့လား
ဒုတိယံ မိ. ထပ်ပြောတာက တော့မကြာသေးပါဘူး။မီးမီးသော် ၊လူမုန်းစစ်မုန်း ဆိုတာ ဦးမောင်မြင့်သား သားကြီး (ခ) သန်းထွဋ်ဦး။မှတ်မိပါရဲ့လား။
ကျွန်တော်ကတော့ သေသေချာမှတ်ထားလို့ မလွဲလောက်ဘူးထင်ပါတယ်။
အရင်ပို့ စ်တွေမှာ ပြဿနာမရှိပေမယ့် ခုနောက်ပိုင်းမှ Thantwethar က သူ့ အမှုသူပတ်သွားပီ။ဘာလို့ လဲ ဆိုတာအားလုံးသိချင်မှာပေါ့။
အဆိုပါ သံတွဲသားမှာ နောက်လိုက်တွေဖြစ်တဲ့ ice cube,pyinlepyaw,တာနော,killer,lupol,mother,လူမုန်းစစ်မုန်း,ငရဲသား, သူတို့ တွေ
ကအင်အားဖြည့်ဝင်လာစမြဲပါ။သူတို့ ရေးကြတဲ့ ဦးတည်ချက်အားလုံးမှာ ဘယ်သောအခါ မှ ဂိတ်ပိုင်ရှင်ဦးကျော်ကျော်ရဲ့ကောင်းကြောင်းတခါမှမပါ။သူကို
ကပ်ဖား လို့ တမျိုး၊ဖာကောင်း(နားနဲ့ မနာဖဝါးနဲ့ နာပေးပါ)တမျိုးအမျိုးမျိုး စွပ်စွဲခဲ့ကြတယ်။နောက်ပိုင်း ဒီသံတွဲသားအကောင့်က အာဏာပိုင်တွေ
နဲ့ ပေါင်းတယ်လို့ တခါ၊အငယ်အနှောင်လေးတွေကရေးပေးပါတယ်လို့ တစ်ခါအမျိုးမျိုးပုတ်ခပ်ခဲ့တာပါ။အဲတော့ ဒီလိုစိတ်ဓာတ်မျိုးသာ
ဦးကျော်ကျော်မှာရှိခဲ့ရင် သို့ မဟုတ် သူတို့ ပြောတဲ့ သံတွဲသားအကောင့်သာ ဦးကျော်ကျော်ဖြစ်ခဲ့ရင် ဒီလိုစာမျိုးကိုရေးပေါ့မလား။
ဒီင်္သတင်းကတော့ တော်တော်ဆိုးတဲ့သတင်းပါပဲ။ ရဲတပ်ဖွဲ့က ဘာလုပ်နေလဲ။ အရင်က တောင်ကုတ်မှာပဲ ဒါတွေရှိတယ်ဆိုပြီးသတင်းကြားမိတာ။ အခုတော့ သံတွဲရောက်နေပြီဆိုတော့ မိဘတွေအတွက်ရင်လေးစရာပဲ။ အခုတင်ထားတဲ့လူတွေက သံတွဲက မဟုတ်တော့ စဉ်းစားစရာပါပဲ။ ရဲတပ်ဖွဲ့က သေချာတယ်ဆိုရင်တော့ မိအောင်ဖမ်းဖို့တော့ တာဝန်ရှိတယ်လို့ယူဆပါတယ်။ မမိဘူးဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ သံတွဲမြို့သူ မြို့သားတွေကတော့ ရဲတပ်ဖွဲ့အပေါ် အယုံအကြည်လုံးဝမရှိတော့ဘူးဆိုတာ သဘောပေါက်ဖို့တော့ လိုအပ်လိမ့်မယ်။ရဲတွေဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာလည်း အားလုံးသိအောင် တင်ပြပေးသွားမှာပါ။
ဒါက တမြန်နေ့ ကတင်တဲ့ မှောင်ခိုပို့ စ်မှာ သံတွဲသားဆိုသူရေးသွားတာပါ။အကောင့်ပေါင်းမြောက်မြားစွာလက်ညှိုးထိုးတဲ့ ကပ်ဖား၊ဖာကောင်းဆိုသူ ဟာ
ဘယ်သူလဲ။ဦးကျော်ကျော်ဟာ သူတို့ ပြောသလို လူမျိုးဆိုရင် ဒီစာမျိုးရေးပေါ့မလား။တက်တက်စင်အောင် လိမ်မှုကြီးပေါ်သွားပါပီ။ဘယ်သူ မှမဟုတ်ပါဘူး
သံတွဲက လူတွေအားလုံးသိပြီးသား အင်တာနက်မင်းသားချောကြီးကိုယ်၌သာလျှင်ဖြစ်ကြောင်းပါ။
ဤနေရာမှ လူကြီးမင်းများ ခေါင်းသုံးပြီးသုံးသပ်ပေးစေလိုပါတယ်။အမှားကို ကျူးလွန်ဖို့ ရာလွယ်ကူကြသလောက် အမှန်တရားလေးကိုချစ်ပြကြပါ။
ကျွန်တော် ဆရာကြီးမဟုတ်ပါ။မေတ္တာသမားသာလျှင်ဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်မရလို့ ဝင်ပြောရတာပါ။
အာရက္ခ မြေသား ……..
ခင်ဗျားပြောသလို ကျွန်တော်က အဲဒီအဖွဲ့နဲ့ မတူပါဘူးဗျာ။ ကျွန်တော်က ကိုယ့်မြို့ရွာအတွက်ပဲ အမှန်ကိုအမှန်အတိုင်းရေးတာပါ။ အခု ရဲအောင်လံ ဦးကျော်ကျော်က ကျွန်တော်နဲ့လည်း မပတ်သက်သလို ဦးကျော်ကျော်က သူ့ဘာသာသူနေတာပါ။ ကျွန်တော့်ကို ဦးကျော်ကျော်ဆိုပြီး စွပ်စွဲပြီးတော့ ဦးကျော်ကျော်အပေါ်မှာ အိမ်ကို လောက်လေးခွနဲ့ပစ်တယ်လို့ ကြားရတယ်။ ဒါတွေကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် နောက်ကွယ်မှာ ဒွါရာဝတီကားဂိတ်ပိုင်ရှင် ဦးချိုကြီးက ကြိုးကိုင်ပြီး ငွေပေးပြီးတော့ ထွန်းထွန်းဦးဆိုတဲ့ကောင်ကို ဒွါရာဝတီကားဂိတ်မှာ ကျွေးမွေးထားပြီးရန်ကုန်သွားရင်လည်း အသွားအပြန်ကားခ အခမဲ့ ပေးစီးထားတာကိုကြည့်ချင်းအားဖြင့် ဦးကျော်ကျော်နဲ့ မတည့်တဲ့ ထွန်းထွန်းဦးဆိုတဲ့ လူကို မွေးပြီးတိုက်ခိုက်ခိုင်းနေတယ်ဆိုတာ တမြို့လုံးအသိပါပဲ။ပြီးတော့ အင်တာနက်မင်းသား ဦးခင်မောင်မြင့်နဲ့ သန်းထွဋ်ဦးတို့ကို မဟုတ်ကဟုတ်က သတင်းတွေရေးခိုင်းပြီး yel ag lun ဆိုတဲ့ နာမည်ကတစ်မျိုး kyawkyaw11 ဆိုတာကတစ်မျိုးနဲ့ အားလုံးသူ အထင်လွဲအောင် လုပ်နေကြတယ်ဆိုတာ သံတွဲမြို့သူမြို့သားတွေအားလုံး ပြောနေကြတယ်ဆိုတာ သတင်းအနေနဲ့ ပြောပြတာပါ။
တစ်မြို့လုံးနဲ့ တစ်ယောက်ထဲ ဖြစ်နေတာကို မသိရှာတာတော့ ရူးသွပ်ခြင်း
ဂေါက်ကြောင် ခြင်း တစ်မျိုး ပါပဲ… ကျွတ်…ကျွတ်…
ဆင်သေကို ဆိတ်ရေ နဲ့ဖုံးခြင်းသည် လုံခြုံပါ၏လော…
ရွာသူရွာသားကိုသာလျှင် လှည်းစား၍ ရပါမည်
သံတွဲမြို့ မှာတော့ အားလုံး အူမချေးခါး မကျန် သိကြသည်သားတည်း… ငါ့ကောင်
ခက်ပါပေ့ တော်တော်ကို စိတ်မာန်တင်းပီး ရှင်းလင်းနေရပါလား
အကယ်ဒမီ မရနိုင်ဘူးနော် ဒီလိုရှင်းလို့ ဘာအကျိုးထူးရနိုင်မှာတုန်း ဟ
ခက်လိုက်တာ အသိတရားလဲ ဘယ်တော့များမှ ရနိုင်တော့မလဲ
ကိုယ့်အဆင့်ကို မြှင့်မှရပါမယ် စိတ်ထိန်းပါ ရာသီဥတုအေးနေပေလို့သာ တော်သေး.
ဘယ်လို အကြောင်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ် လူနာမည်တွေကို ဖေါ်ဖေါ် ပြောတတ်တာ ဟာ ကောင်းတဲ့အကျင့်
မဟုတ်ပါဘူး ၊ နောက်ကိုဆင်ခြင်စေချင်တယ် ၊ ဟုတ်တယ် မဟုတ်ဘူးပြောနိုင်ရအောင် ဘယ်
သူ ဟာ ဘာဆိုတာ ဘာမှ သေချာတဲ့ ကိစ္စလဲ မဟုတ်ပါဘူး ။
ရမ်းသမ်း ပုတ်ခတ်ပီး ဘယ်သူ့ကိုမှ မပြောတာ အကောင်းဆုံးပါ။
ကိုယ္ခ ခင်ဗျား ..
ကိုကျော်ကျော် နံမည်ကိုဘာကြောင့်ခဏခဏ သုံးနေရတာတုန်းဗျ..
ခင်ဗျားက နာမည်ထည့်ပြောလိုက် သူ့ တိုက်အိမ်ကို ဂဲထု ခံရလိုက်နဲ့..
ခု တစ်ကြိမ်နဲ့ဆိုရင် ကိုကျော်ကျော့် အိမ်ကို ဂဲထု ခံရတာ နှစ်ကြိမ် တိုင်တိုင်ရှိခဲ့ပြီဆိုတာ
ဒါကြောင့် ဘယ်သူ့ကိုမဆို ထိခိုက်စေချင်တဲ့ စကားလုံးမျိုး မသုံးတာ အကောင်းဆုံးလို့ ထင်တယ်။
ညည့် သန်းခေါင်ကျော်ကြီး အချိန်မှာ သံမူလီနဲ့လေးဂွ နဲ့ဝိုင်းပစ်ကြတယ်
အားလုံး ၂ ကြိမ်တိတ်ိ ပစ်ခံ၇၇ှာတယ်
ခု ဆိုရင် ကိုကျော့် ခင်မျာ မအိပ်၇ဲ မထွက်၇ဲ ဖြစ်နေ၇ ၇ှာပီ
တစ်မြို့လုံးက လူတွေ ဘာကြောင့် ဒီလောက်မုန်းနေကြတာလဲ
ဘယ်လောက်မုန်းမုန်း အသက်အန္တ၇ာယ် ထိခိုက်လောက်အောင်မလုပ်သင့်ဘူးလို့
နောက်တစ်ကြိမ် အလှည့်လာ တော့မယ်လို့ သတိတော့ ပေးလိုက်ပါသေးတယ်၊
အဆော်ခံ မထိခင် တစ်ပါတ် ခန့် က သတင်းကြားမိတာပါ၊
ဒါပေမဲ့ သကောင့်သားက ဂေါက်ကြောင်နေတော့ သတိပေးတာ ဂရု မမူမိတာနဲ့တူတယ်၊
ခုလဲ အသံတွေ ထပ်ကြားနေရပြန်ပီ၊ နောက်ထပ် တစ်ကြိမ် လာမယ်တဲ့ဗျာ။
သူများတွေကို ပြုမူမိခဲ့လို့ တန်ပြန်ဝဋ်လည်တာက ကြောက်စရာကောင်းလိုက်တာ။
ဒါလောက်အဆော်ခံထိ တာ မဖြုံဘူး တဲ့….
သတင်းကြားမိတာကတော့ အမဲဖျက်အဖွဲ့က ၇ ယောက် လို့ကြားမိတယ်…
ခုလဲ ထပ်ကြားနေရပြန်ပီ… ကျုပ်တော့ ကြောက်တယ်ဗျို့…
သတ္တဝါ အားလုံး ငြိမ်းချမ်းကြပါစေ.. ခလုပ်မထိ ဆူးမညိကြပါစေနဲ့…
ဘယ်လို သက်သေတွေပဲ ပြပြ .. လူဟာ လူပါပဲ…၊
ဘယ်သူမဆို ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ အရောင်ပြောင်းနိုင်ကြတာပဲလေ.၊
မဟုတ်ကြောင်းပြောလေ ဟုတ်နိုင်လေ ဆိုတာ သတိမှ ရပါလေစ….။
Mandalaygazette မှာ လာရှင်း ပြနေလဲ ဒီက ရွာသူရွာသားတွေက သံတွဲသားတွေ
ဆိုရင်ကြည့်မရဖြစ်နေကြလို့ ဘယ်သူကမှလဲ စိတ်ဝင်စားမှာ မဟုတ်ဘူးဗျ…။
ရှင်းလေ ရှုပ်လေ မန်းလေ ပြဲလေ .. ဆိုတာ သိတယ်ဟုတ် !
ဟုတ်ပါပြီ အကိုတို့ ဦးလေးတို့ရေ
သူများ ပို့စ်အောက်မှာ စကားစစ်မထိုးကြပါနဲ့တော့ အုပ်စုတူသော (သို့) တစ်ယောက်ထဲဖြစ်သော
သံတွဲသား မေသခင် တုတ်ကြီး အာလူးယက္ခ( သူများခေါ်၍ လိုက်ခေါ်ခြင်း)တို့ရှင့်
သိပ်ပြောချင်နေရင် ပို့စ် တစ်ခု အသစ်တင်ပြီး စစ်ထိုးကြပါစို့လား
kyaw kyaw 11 တင်တာက လဝက ကိစ္စပါ။ အာလူးယက္ခ ဝင်ရေးတာက ဘာမှ မဆိုင်ပဲနဲ့
ကျွန်တော် ကျော်ကျော် မဟုတ်ပါဘူး လို့ posts အသစ်တင်ရေးလေ ….။
ဒီမိုကရေစီစံနစ်မှာ… ကိုယ့်ကို အုပ်ချုပ်အာဏာပြ(ပိုင်)သူကို.. ဝေဖန်ခွင့်ဆန်းစစ်ခွင့်..ရှိတယ်..။
ဝေဖန်ဆန်းစစ်တယ်ဆိုရာမှာ.. အဲဒီသူဘ၀နစ်နာပျက်စီးအောင် တိုက်ခိုက်အပုပ်ချရတာမျိုးလည်း မဟုတ်ပေဘူး..။
သာမန်လူပုဂ္ဂိုလ်အချင်းချင်းမှာ အပြန်အလှန်သဘောတူညီချက်ရှိပဲ.. ဝေဖန်ဆန်းစစ်ခွင့်မရှိဘူး..။ တဖက်သတ်လုပ်ရင်.. အဲဒါသူများပုဂ္ဂလိကအခွင့်အရေးစော်ကားတာပဲ..
သတင်းစကားပြန်ပြောရမှာ ပစ်စာသဘောမသက်ရောက်စေပဲ အချက်အလက်နဲ့ကိန်းဂဏန်းကို အခြေခံထား ပြောရတယ်..။ လူပုဂ္ဂိုလ်ဆီ ဦးတည်မသွားသင့်ဘူး..။